[OKUFANELE] Isipele Sedatha ye-iOS & Buyisela - Ngokukhetha Isipele & Buyisela Imininingwane ye-iOS
Isipele Sedatha ye-iOSK futhi Buyisela
Ukuchofoza okukodwa kudatha yokusekelayo kusuka kumadivayisi we-iOS (i-iPhone / i-iPad / iPod) kuya ku-Windows naku-Mac.
Ukuchofoza okukodwa ukubuyisela i-Backup Idatha kumadivayisi we-iOS noma ku-Windows naku-Mac.
Bethela Isipele sakho ngephasiwedi ukugcina idatha yakho iphephile.
Buka noma uthumele idatha yakho eyisipele ngokukhululekile kuWindows naku-Mac.
Backup iPhone / iPad / iPod Idatha ku-PC / Mac
Ungabhekhapha i-iPhone, i-iPad, idatha ye-iPod (Bheka ukuthi iyiphi idatha ongayenza ukuze wenze isipele) ku-Windows naku-Mac ngokuchofoza okukodwa. Lapho usuxhume idivaysi yakho ye-iOS kwikhompyutha, uhlelo luzobona ucingo lwakho lukulungele ukukwenzela iSipele. Uma ufuna ukugcina isipele sakho siyimfihlo, ungabhala ngemfihlo ngesipele sakho ngephasiwedi esethwe nguwe. Ngaphezu kwalokho, ungabuka yonke idatha yesipele ngokukhululeka kuWindows noma i-Mac nganoma yisiphi isikhathi. Futhi isipele osenzayo ngeke sithathe indawo yangaphambili.
Qhathanisa ne-iTunes ne-iCloud
Dinga i-PC / Mac
Bheka Idatha Yesipele
Buyisela idatha ku-iOS yedivayisi / kwikhompyutha (iWindows / Mac OS)
Unelungelo lokukhetha noma iyiphi ibhekhaphu oyenzile ukuze ibuyiselwe, ungakhetha ukukhetha leyo mininingwane ofuna ukuyibuyisela, futhi yonke imininingwane ingabukwa ngaphambi kokubuyisela.
Ungabuyisela yonke imininingwane (Hlola ukuthi Imiphi imininingwane Ongayibuyisela) ohileleke kwisipele ku-Windows naku-Mac, ngokubuyisela ku-iOS yedivayisi, ungabuyisela oxhumana nabo namanothi kude (izinhlobo zamafayela eziningi ezizosekelwa maduze). Futhi ngeke ibhale idatha kwiDivaysi yakho ye-iOS.
Idatha Yokusekela Isipele Nokubuyisa
Uhlobo Ledatha Esekelwayo
Idatha yokusekelayo ye-iOS
• Oxhumana Nabo • Imilayezo • Umlando wokushaya izingcingo • Amanothi • Izithombe • Ikhalenda • Isikhumbuzi • Imeyili yezwi • I-WhatsApp nezinamathiselo • Ama-memos ezwi.
Buyisela idatha kudivayisi ye-iOS
• Oxhumana nabo • Amanothi
* Izinhlobo eziningi zedatha zizoxhaswa kungekudala
Buyisela idatha kuWindows / Mac
Okungcono Kakhulu kwe-iTunes ye-Backup & Buyisela i-iOS yedivayisi
Landa i-Isipele Sedatha ye-iOS uphinde ubuyisele Manje!
Ngigula ngempela i-iTunes, ingumuntu futhi ayihlakaniphile. Lapho ngithola leli thuluzi, ngabona ukuthi buyini ubuchwepheshe obukhuthaza ukuthuthukiswa kwamandla akhiqizayo.
Nge-Isipele se-iOS & Buyisela Mina izithombe zesipele ku-iPhone yami kuya kwi-Mac Bookpro yami njalo. Kulula ukuyisebenzisa futhi kuwusizo impela.
Okungihluphayo ukuthi ungabheka kuqala yonke imininingwane efayilini eyisipele, oxhumana nabo, izithombe, umlando wezingcingo, amanothi, ikhalenda, imiyalezo yombhalo, njll. Uyiqamba igama.
Izindlela ze-4 Izindlela Zokugcina Isithintana ku-iPhone
Ungawenza Kanjani Isipele ku-Mac ku-Mac - Yenza isipele Oxhumana Nabo, i-SMS, Ucingo nokuningi
Ungawenza Kanjani Isipele? I-3 Hacks Okufanele Uyazi
Ungawenza Kanjani Isipele ku-Computer kuya kwikhompyutha
Ungawenza Kanjani Backup iPhone ngaphandle iTunes
Ungasisebenzisa Kanjani Isipele se-iPhone Photos (NgoFebhuwari 2018)